बैंकिङ शैली Saturday Archives - Banking Khabar
बैंकिङ खबर । कुनै पनि देशमा नोट छपाई तथा निष्काशनको कानुनी अधिकार त्यस देशको सरकार वा केन्द्रिय बैंकलाई मात्र हुन्छ । कानुनी अधिकार प्राप्त नगरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै पनि प्रकारले गैरकानुनी तवरबाट ठगी गर्ने मनसायले बनाएको नोटको प्रतिलिपीलाई जाली नोट भनिन्छ । मुलुकी ऐनको खोटा चलनको महल (१) ले जाली नोटको सम्बन्धमा “सरकारी
बैंकिङ खबर । सामान्यतयाः विदेशी मुद्रा सटही गर्ने कार्य नै मनी एक्सचेन्ज हो । हाम्रो देशमा संचालन भइरहेका विभिन्न व्यवसाय मध्ये यो पनि एक प्रकारको व्यवसाय हो । नेपालीहरु विदेशबाट फर्केपछि या विदेशीहरु नेपालमा भित्रीएपछि विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली रुपैंया लिनका लागि मनी एक्सचेन्ज कम्पनीहरुको सहायता लिन सकिन्छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तोकेका २१
धनाड्यले अपनाएका : सफलता प्राप्तीका महत्वपूर्ण तीन आधारहरु
मधुसुदन पोख्रेल । विश्व विद्यालयको एउटा स्नातक कक्षामा एकजना प्रध्यापकले असाधारण किसिमले आपूmले के गरिरहेको कुनै कुरा वर्णन नगरी होसियारीपूर्वक एउटा काँचको घडा आफ्नो डेस्कमाथि राखे । त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरूले देख्ने गरी एउटा झोलामा ढुङ्गाहरू ल्याई एक एक झिकी नभरुञ्जेल घडाभित्र राखे । त्यस पछि उनले विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोधे के घडा भरियो ? घडा भरियो
स्वदेशी उत्पादलने १२ बर्षमै आर्थिक कायापलट (ब्राजिलको सफल विकास मोडल)
बैंकिङ खबर । कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले संसारकै नवौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक ब्राजिलको अर्थतन्त्रको बनावटको श्रेय खुला बजार र स्वदेशी उत्पादनलाई जान्छ । ब्राजीलको अर्थतन्त्र ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो हो भने पश्चिम विश्वको दोस्रो ठूलो । सन् २००० देखि २०१२ बिचमा ब्राजीलको अर्थतन्त्रले संसारकै सबैभन्दा दु्रुततर वृद्धि हासिल गर्यो । त्यो समयमा ब्राजीलको कुल
बैंकिङ खबर । बैंकमा जागीर खान चाहानुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई सोही अनुसार तयार राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, तपाईँसँगै सोही जागीरका लागि अन्य थुप्रैले एप्लाई गरेका हुन्छन् । कयौँमध्येबाट छनौट गरेर तपाईँलाई नै किन राख्ने त ? यसका लागि तपाईँसँग अरुमा नभएको र बैंकलाई काम लाग्ने सीप, क्षमता वा योग्यता हुनुपर्छ । यसका अलावा तपाईँले जागीरका लागि
बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई बैंकिङ कसुरको कार्बाही
बैंकिङ खबर / व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि बैंकबाट कर्जा लिएर उक्त कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत कार्बाही हुन्छ । आफूले जे उद्देश्यका लागि कर्जा लिइएको हो, सोही क्षेत्रमा कर्जा परिचालन नगरी फरक ठाउँमा लगानी गरेमा त्यसलाई कर्जा दुरुपयोग भएको मानिन्छ । त्यस्तो गर्नेलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारबाही समेत गर्ने प्रावधान छ । आफ्नो
बीग विजनेसमेनका गोप्य रहस्यहरु
बैंकिङ खबर । कतिपय सफलताका सुत्रहरु गोप्य नै राखिन्छन् । ठूलो संघर्ष गरेर सफल भएका धनाढ्यहरु आफ्नो प्रतिष्पर्धामा अरु नआउन् भन्ने धारणा राख्ने भएकाले आफ्नो सफलताका सुत्रहरु प्रचार गर्दैनन् । यद्यपि, ठूलाठूला आयोजनाहरुमा ठूलो रकमको लगानी गर्नेहरुले के आधारमा लगानी गर्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो हुन्छ । धेरै लगानी गर्दा डुब्ने डर हुने, आशातित रुपमा
बैंकिङ करियर : कसरी डेभलप गर्ने ? ( नलेज र टिप्ससहित )
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भइरहेको हुन्छ । आवेदन पनि थुप्रै पर्ने गर्छ । तर, छनौटका क्रममा बैंकहरुले आफूले खोजेजस्तो आवेदक नपाएको गुनासो गर्छन् । यता, आवेदकहरु आफू किनछनौट भइएन भन्नेमा अलमल पर्छन् । कुनै पनि बैंकमा जागीर खानको लागि लिखित परीक्षाको तयारी गर्दा थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी